Ny faritra arovana an-dranomasina (MPA) dia fitaovana fitantanana manan-danja hanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fifampiresahana fandrahonana any an-toerana.
Ny MPA dia faritana ho “sehatra ara-jeografika voafaritra mazava, ekena, voatokana, ary tantanana amin'ny alalan'ny fomba ara-dalàna na fomba mahomby hafa, mba hanatrarana ny fiarovana maharitra ny zavaboary miaraka amin'ny serivisy momba ny tontolo iainana sy ny soatoavina ara-kolontsaina mifandraika amin'izany. ref
Misy karazana MPA isan-karazany miainga avy amin'ireo izay arovana amin'ny fampiasana rehetra azo alaina sy manimba (antsoina koa hoe "faritra tsy azo raisina" na "réserve an-dranomasina"), ka hatramin'ireo izay ahafahana mampiasa maro (oh: fizahan-tany, jono fialamboly, fikarohana). Ny haavon'ny fiarovana dia mety hiova ara-potoana ihany koa miaraka amin'ny famerana ny fampiasana sasany tsy ampiharina afa-tsy amin'ny fotoana sasany ao anatin'ny taona (ohatra, vanim-potoana fanatobiana trondro).
Kintan-dranomasina amin'ny fandriana ahi-maitso voaaro ao Kiobà. Sary © Ian Shive
Mitantana ny fanjonoana be loatra na ny fitrandrahana ireo zavamananaina manan-danja amin'ny haran-dranomasina toy ny herbivores
Tohano ny fanaraha-maso ny fandrahonana toy ireo mifandray amin'ny fizahan-tany sy ny fandefasana entana, ka manohana ny fahasalaman'ny haran-dranomasina ary mahatonga ny vatohara ho afaka hiatrika ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro.
Jereo ny Fianarana an-tserasera momba ny haran-dranomasina Coral Reef Lesona 6: Paikady fitantanana ho an'ny faharetana raha mila fanazavana fanampiny momba ny paikady fitantanana ny haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlas fiarovana an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFaritra arovana an-dranomasina NOAA
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFaritra arovana an-dranomasina: sisin-tany tsy miovaova amin'ny tontolo miova